ट्राफिक चेतना र कारवाही सँगसँगै अघि बढाउछौंः दोलखा ट्राफिक प्रहरी प्रमुख - Edolakha
ट्राफिक चेतना र कारवाही सँगसँगै अघि बढाउछौंः दोलखा ट्राफिक प्रहरी प्रमुख
9 months ago/Monday, October 21st, 2019
दोलखा जिल्लामा पछिल्लो समय ट्राफिक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बिभिन्न समस्याहरु देखिएका छन् । दशैंतिहार जस्तो चाडपर्वका बेला यात्रुहरु भाडामा ठगिएको देखि निजी सवारीका साधनले मनोमानी भाडा लिएर यात्रु ओसारेको गुनासो सर्वत्र छ । ट्राफिक व्यवस्थापनका बारेमा अन्य समस्याहरु पनि यथावत छन् । विगतमा प्रहरी सहायक निरिक्षक (असई) को नेतृत्वमा सँचालन हुँदै आएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय दोलखा हालसालैदेखि प्रहरी नायव निरिक्षक (सई) को नेतृत्वमा सँचालन हुन थालेको छ । हामीले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दोलखाको हालै मात्र प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रहरी नायव निरिक्षक गोकर्ण नेपालसँग ट्राफिक व्यवस्थापनकै बिषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, सहकर्मी लक्ष्मी बस्नेतले गरेको कुराकानी ।
तँपाई भर्खरै जिल्ला ट्राफिक प्रहरीको प्रमुख बनेर दोलखा आउनु भएको छ । तँपाई आएपछिको अवधिमा दोलखा जिल्लामा ट्राफिक व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
सामान्यतया यहाँ ट्राफिक जाम हुने वा अन्य किसिमका अप्ठ्याराहरु त मैले केहि पनि देखिन । विशेष गरी यहाँ निजी सवारी साधानहरुले प्रयोजन विपरित यात्रुहरु बोकेर बढी भाडा लिएको देखेँ । त्यसलाई हामिले क्रमैसँग नियन्त्रण गर्दैछौं । अर्काे कुरा भौगोलिक बनावट र बाटोको कुराले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । साथसाथै बाटोको कारणले दुर्घटना हुने जोखिम पनि देखियोे ।
त्यसो भए, जिल्लामा ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
विशेष गरी मैले यहाँ चालक, सहचालक लगायत अन्य व्यक्तिहरु सेवाग्राही भनौं वा आम जनसमुदायमा पनि चेतनाको स्तर कम भएको पाँए । अहिले चाडपर्वको समय छ, यो समयमा विद्यालयहरु पनि बन्द भएको छ । मैले विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई र बसका चालक सहचालकलाई लक्षीत गरेर एउटा पाठ्यक्रम तयार पारेको छु । चाडपर्व सकिने बित्तिकै निकट भविष्यमै हामि त्यो पाठ्यक्रमको आधारमा ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं ।
मेरो प्राथमिकतामा चाहीँ सबैभन्दा पहिले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने नै रहन्छ । दोस्रो कुरा कारबाहीलाई पनि साथसाथै लैजाने योजना छ । अब विभिन्न संघसंस्था वा स्थानीय क्लवसँग समन्वय गरेर जनचेतनामुलक कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ ।
सामान्यतया, नयाँ कार्यालय प्रमुख आएपछि ट्राफिक चेकिङमा कडाई गर्ने, आँफुले सिकेका नयाँ, ज्ञान, सिपको प्रयोग गर्ने पनि हुन्छ । तँपाईले चाँहि केहि नयाँ कामको सुरुवात गर्नुभएको छ ?
ट्राफिक व्यवस्थापनमा कारबाहीले मात्रै पनि पुग्दैँन कतिपय अवस्थामा मानिसहरुले ट्राफिक नियम जानेर उल्लंघन गरेका हुन्छन् भने कतिपय अवस्थामा नजानेर र नसकेर उल्लंघन गरिरहेका हुन्छन् । जस्तै विकसित मुलुकहरुमा विद्यालयदेखि पाठ्यक्रममा नै ट्राफिक नियमसँग सम्बन्धीत जानकारीहरु पाठ्यपूस्तकहरु समावेश गरिएको हामिले पाएको छौं । तर हाम्रो देशमा त्यस्तो अवस्था छैन । मेरो प्राथमिकतामा चाहीँ सबैभन्दा पहिले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने नै रहन्छ । दोस्रो कुरा कारबाहीलाई पनि साथसाथै लैजाने योजना छ । अब विभिन्न संघसंस्था वा स्थानीय क्लवसँग समन्वय गरेर जनचेतनामुलक कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ । यतिबेला चाडपर्व विशेष भएकाले गर्दा अहिले कुनै पनि कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।
सई साहव, त्यसो भए जिल्लाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज र सरल बनाउनका लागि तँपाईका कस्ता योजना छन् ?
सर्वप्रथम म यहाँ आउने वित्तिकै सडक कार्यलयसँग पनि कुराकानी गरिसकेको छु । वर्षातको समय पनि भर्खर सकिएको छ । विस्तारै यो बाटोको स्तरोन्नती हुँदै जाला, तत्कालका लागि बढी खाल्डाखुल्डी भएको ठाउँमा ग्राबेलहरु हालेर अहिले टाल्ने कामहरु भइरहेको छ । म पनि यहि सिन्धसपाल्चोकबाट आएको हो । सिन्धुपाल्चोकमा पनि एउटै सडक कार्यालयले हेर्ने भएकोले त्यहाँ देखि नै मेरो समन्वय थियो । यो सडकलाई छिटो स्तरोन्नती गर्ने प्रक्रिया त विस्तारै हुँदै जान्छ तर, कहाँ बढी समस्या छ, त्यहाँ टालटुल गर्ने वा खाल्डा पुर्ने सम्मका काम गर्नलाई जोड गरेका छौं । अनि अर्काे कुरा निजी सवारी साधानले बढी भाडा लिएर यात्रुहरु बोक्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न अस्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग बसेर कुराकानी भएको छ । ती कुराहरु आए, अर्काे अब चेकजाँचलाई कडाइ गर्ने । विशेषगरी लाईसेन्स प्राप्त नगरेका मानिसहरुले सवारीसाधन चलाएको पनि भेटियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अभियानमा छौं ।
दशैमा जस्तो बढी भिडभाड तिहारमा अलि हुँदैन । विगतका अनुभवहरुलाई हेर्दा तिहारमा चाहीँ दोहोरो आउने जाने बराबरी जस्तैै यात्रुहरु हुन्छन् । म यो कार्यक्रम मार्फत पनि आम नागरिकमा के अनुरोध गर्छु भने कसैले पनि सम्बन्धीत काउन्टर भन्दा बाहिर विचौलियासगँको विश्वासमा परेर टिकट नकाट्नु होला । बोलेरोको हकमा सहरी क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने क्रममा डबल क्याबिन भएका बोलेरोहरुमा यति सिट भनेर त्यसको बिलबुकमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । जुन क्याबिन भित्र रहेका सिट भित्र यात्रुहरु चढन पाइयो । त्यो पनि भाढा प्रयोजनका लागि होइन । त्यसलाई अब बिस्तारै नियन्त्रण गर्दै जाने हाम्रो योजना छ ।
तँपाईले यसो भनिरहदा दशैंमा यात्रा गर्ने यात्रुहरु ठगिएको गुनासो छ । चरिकोटदेखि काठमाण्डौंसम्म जाँदा एक हजार भाडा तिर्नु परेको गुनासो छ । यो ति सिधै ठगि भएन र ?
गुनासोहरु आए चाडपर्व मनाएर फर्कने क्रममा यात्रुहरुलाई एकैपटक फर्किनु पर्ने अवस्था थियो । भाडा बढी अशुल्ने, कालोबजारी गर्ने गुनासो हरु आए ती गुनासोलाई हामिले सकेसम्म सम्बोधन गरेका छौं । सात वटा बसलाई नियमअनुसार बढी भाढा लिएको पाइएपछि निर्धारित भाडादरमा हामिले पठाएका छौं । हामीले काउन्टरको आसपासमा सूचना पनि टाँसेका छौं । सम्बन्धीत काउन्टरमा गएर टिकट काट्नुहोला, बाहिर विचौलियाको प्रभावमा परेर टिकट नकाट्नु यदि चाहिने भन्दा बढी भाडा लिएमा निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय साथै मेरो व्यक्तिगत नम्बर समेत उपलब्ध गराएका थियौं । त्यति हँदा गुनासो आएका सात वटा सवारी साधानलाई हामिले कारबाही ग¥यौं । त्यो भन्दा अरु गुनासो आएको छैन र हामिले चेकजाँच गर्ने क्रममा पनि गुनासो नआएपनि चाडपर्वलाई लक्षित गरेर दोलखाका विभिन्न ५ ठाउँमा चेक पोइन्ट राखेर विहानदेखि बेलुकीसम्म चेकजाँचहरु भएका छन् । हामिले बढी भाडा नतिर्नको लागि आह्वान गरेका थियौं । जहाँ बढी भाडा लियो त्यहि कारबाहीको दायरामा आएका छन् ।
यातायात समितिको टिकट काउन्टरमा टिकट नपाउने, फेरि चोकमा सोही यातायातका बस महँगो भाडामा रिर्जभमा उपलव्ध हुने । कतै ट्राफिक प्रहरीले पनि यस बिषयमा जति सक्रियता देखाउनु पर्ने हो त्यो गर्न नसकेको हो की ?
सक्रियता देखाउन नसकेको भन्ने कुरा म स्वीकार गर्दिन, किनभने ६ सय २ वटा सवारी साधानलाई कारबाही गरेका छौं । त्यो भनेको अघिल्लो महिनाहरुको भन्दा धेरै र त्यसबाट ४ लाख ४२ हजार राजस्व संकलन भएको छ । यद्धि त्यो सक्रियता थिएन भने त्यो हुने थिएन । दशैमा जस्तो बढी भिडभाड तिहारमा अलि हुँदैन । विगतका अनुभवहरुलाई हेर्दा तिहारमा चाहीँ दोहोरो आउने जाने बराबरी जस्तैै यात्रुहरु हुन्छन् । म यो कार्यक्रम मार्फत पनि आम नागरिकमा के अनुरोध गर्छु भने कसैले पनि सम्बन्धीत काउन्टर भन्दा बाहिर विचौलियासगँको विश्वासमा परेर टिकट नकाट्नु होला । कसैले बढि भाडा मागेमा तुरुन्त नजिकैको ट्राफिक कार्यलयमा या सडकमा खटिएको ट्राफिक प्रहरीलाई र जिल्ला प्रहरी कार्यलय दोलखाको हटलाईन नम्बर १०० मा खबर गरी सचेत नागरिकको परिचय दिई हामीलाई पनि जानकारी गराईदिनु हुन आम नागरिकमा आह्वान गर्छु ।
बोलेरोको हकमा सहरी क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने क्रममा डबल क्याबिन भएका बोलेरोहरुमा यति सिट भनेर त्यसको बिलबुकमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । जुन क्याबिन भित्र रहेका सिट भित्र यात्रुहरु चढन पाइयो । त्यो पनि भाढा प्रयोजनका लागि होइन । त्यसलाई अब बिस्तारै नियन्त्रण गर्दै जाने हाम्रो योजना छ । अलिकति समस्या भनेको ग्रामिण क्षेत्रमा देखियो ग्रामिण क्षेत्रमा जहाँ प्रहरीको पहुँच छैन । त्यो ठाउँमा चाहीँ पछाडि पनि मान्छे हालेर हिडेको पाएका छाँै । त्यसलाई पनि हामिले छड्के चेकजाचँ गरेर कारबाहिको दायरामा ल्याउन सुरु गरेका छौँ ।
४ कार्तिक २०७६ । ३ः२५ बजे प्रकाशित
VIEWS: 8140 पटक हेरीएको